Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga Sare oo ka bilaawday Muqdisho & Gobolada - Wardeeq 24 TV Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga Sare oo ka bilaawday Muqdisho & Gobolada Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga Sare oo ka bilaawday Muqdisho & Gobolada
Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga Sare oo ka bilaawday Muqdisho & Gobolada
gobollada kale ee dalka waxaa saakay ka bilowday imtixaanka Shahaadiga ee dugsiga sare, kaas oo ay si mideysan u qaadeyso Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Imtixaanka Shahaadiga oo ay Maanta u fariisteen in ka badan 42,000 (Afartan & laba Kun) oo Arday ayaa waxaa daahfuray Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ( Khadar) oo ay wehlinayeen Wasiirka Waxbarashada iyo qaar kamid ah Agaasimayaasha Wasaaradda.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in ay Maanta u suurto gashay inay si rasmi ah u dah furaan qaadista imtixaanka Shahaadiga ee Fasalka 12aad, sidoo kalena ay muuqato in dowladda Soomaaliya & Waalidiintaba ay doonayaan inay Carruurtooda wax bartaan.
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda xilgaarsiinta Eng Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa sheegay in imtixaanka dugsiga sare uu maanta ka bilowday Galmudug, Hir-Shabeelle, Koonfur Galbeed & Jubbaland laguna galayo 121 Goobood marka laga soo bilaabo Gaalkacyo.
Waxaa sidoo kale Wasiirku sheegay in Mamulka Puntland ay Imtixaanka horay u qaadeen una farsiiteen in ka badan 5,000 ( Shan kun) oo Arday, sidoo kalena sanadba sanadka ka dambeeya ay kordhayaan ardayda galeysa Imtixaanka.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanad kasta qaada Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiyada Sare, waxaana mararka qaar ay cabasho xoogan ka timaadaa Ardayda, hayeeshee cabashadaas qaarkood la xaliyo qaarna halkaas looga gudbo
Previous articleMaxaa kasoo baxay kulankii Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Masar?
Next articleCiidamo ka tirsan dowladda oo tababar loo soo xiray